Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule abantu bangibuze, ngingaqala kanjani ukuthola ukuthi ngubani ongiphinde wangiphinda? Lapho abantu besebenzisa isici se-retweet ngaphakathi kwe-Twitter, kulula kakhulu. Ukungena ngemvume ku-Twitter kungachofoza ama-Retweets ku-navigation yangakwesokudla. Ikholomu lesithathu ngamaTweets Wakho, i-Retweeted futhi ikunikeza uhlu lwawo wonke amaTweets akho abuye abhalwe kabusha nokuthi ngubani owenzile. Kukhona futhi ikholi ye-API yokuthwebula idatha ye-retweet ye-